URoborock Dya, eyona nto iphambili emanzi neyomileyo yokucoca ngesandla | Iindaba zeGajethi
URoborock ukhokele kwinkqubela phambili yetekhnoloji kwicandelo lokucoca ngobuchule, kutsha nje Siyihlalutye iRoborock S7 ngokunjalo neyakho indawo yokulahla inkunkuma, kwaye ngoku batshintsha iimveliso ukuphucula esele zikhona, besiya nakwiindawo apho ngalo mzuzu ezinye iimveliso zibonakala zihamba phambili.
URoborock ujika imarike yokuphatha ngesandla ijonge ezantsi ngeDyad, imodeli esebenzayo emanzi neyomileyo. Makhe sivelise amanqaku ale mveliso intsha iRoborock.
Le Roborock Dyad iqaphela amabala kusetyenziswa isixokelelwano sokucoca, ngokwenza njalo ukucoca, ukukhuhla kunye nokoma, ukugungxula okuqinileyo kunye namanzi amdaka kwitanki ye-620 ml. Ikhupha amanzi acocekileyo phantsi ngelixa iiroller zayo zisebenza ukususa ubumdaka.
Inama-roller amabini angasemva kwimiphetho ngokunjalo iimoto ezimbini ezizodwa ezinakho ukwenza ukuba kusebenze izileyi ezintathu zizonke, inkqubo eyahlukileyo kwintengiso.
“Ngaphandle kwothando lwethu lwetekhnoloji, eRoborock sichaza eyethu
ukuthanda ukuthanda izinto zeteknoloji. Ke ngoko, iDyad ikwayimveliso yoovulindlela
kudidi lwayo. Enkosi ngenkqubo yeDyadPower, iDyad kuphela kwesicoci sokucoca ngaphakathi
kumanzi kwaye kome, iinjini ezimbini ezizodwa eziqhuba inkqubo yeenkqubo ezininzi
izileyi, ngaloo ndlela zibonelela ngokucoca ngokufanelekileyo kwaye zisuse ukungcola kwi
edlulileyo, nakwimiphetho. Siyile le mveliso isetyenziselwa izinto ezininzi
Uyakwazi ukususa emanzini amdaka ukuya kumdaka ofakelweyo, usebenzisa i
Inkqubo yokucoca entsha - URichard Chang, CEO weRoborock.
Ukongeza, ine- Inkqubo yokuzicoca ngokuzenzekelayo ekucofeni iqhosha, ihamba nomboniso we-LED Oko kuyasivumela ukuba sichonge iindawo zomgangatho ezigxininisa ukungcola okuninzi, kunye nenkqubo yokulumkisa ngelizwi esele idityanisiwe kwezinye iimveliso zeRoborock. Ngendlela enye, Ibhetri yayo ye-5000 mAh iya kuvumela imizuzu engama-35 yokucoca okungaphazanyiswa okanye ukuya kuthi ga kwi-280 yeemitha zesikwere.
URoborck Dyad uya kufumaneka eYurophu ngo-Novemba 11 ngexabiso eliphakanyisiweyo le- € 449 kwiindawo ezinkulu ezinjengeAliExpress.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » URoborock Dya, oyena mntu uphucukileyo ococekileyo ophetheyo
I-Chopbox yibhodi yokusika eyi-5in1, ngaba ungasinceda? [Uhlalutyo]